Android M mifantoka amin'ny fanalahidy manan-danja 6 | Androidsis
Ny lakilen'ny enina an'ny Android M
Amin'izao fotoana izao Google I / O 2015 no mitranga miaraka amin'ny fanambaràn'ny Android M sy izay rehetra hilazana an'ity topi-maso ity dia havoaka tsy ho ela. Topi-maso ny Android M mba hahafahan'ny mpamorona miomana amin'ny fanovana mahaliana toy ny fahafaha-manolotra ny mpampiasa ny fampandehanana fahazoan-dàlana iray rehefa hampiasa azy voalohany.
Ny iray amin'ireo fiasa ireo dia naseho tamin'ny fampiharana WhatsApp tanteraka. Amin'ny fotoana hanombohanao ny mikrô hampiasa azy io dia hiseho ny varavarankely pop-up mangataka ny fampidirana an'ity singa ity sy fahazoan-dàlana. Ny fanaraha-maso ny fahazoan-dàlan'ny fampiharana dia iray amin'ireo lakileny enina holazainay etsy ambony kely, alohan'ny anananay ny fampahalalana rehetra ho an'ny andro manaraka. Android M no eto.
1 Sundar Pichai manolotra Android M
1.1 Fahazoan-dàlana amin'ny fampiharana
1.2 Takelaka manokana ho an'ny Chrome
1.3 Rohy mivantana amin'ny rindranasa
1.5 Mpamaky fanontana
1.6 Fitantanana bateria tsara kokoa sy USB Type-C
Sundar Pichai manolotra Android M
Sundar Pichai nanambara ny topi-maso Android M izay mifantoka amin'ny lakile enina: alalana amin'ny rindrambaiko, traikefa amin'ny tranonkala, rohy fampiharana, Android Pay, fanohanan'ny sensor amin'ny rantsantanana ary fitantanana bateria nohatsaraina.
Inona tsy fantatsika amin'izao fotoana izao ny anaran'ilay kinova Android M vaovao, ary mitovy amin'ny tamin'ny taon-dasa tao amin'ny Google I / O teo aloha isika fony ny Android L ihany no nahafantarana azy.
Fahazoan-dàlana amin'ny fampiharana
Google dia maniry manaova dingana lehibe amin'ity lalana ity y omeo ilay mpampiasa ilay fahatsapana fa voafehiny tanteraka amin'ny alàlan'ny fampiharana alalana amin'ny sehatra malalaka. Ankehitriny, rehefa manomboka fampiharana isika ary mampiasa alalana manokana dia hanontany antsika raha te hampandeha azy isika.
ireo fahazoan-dàlana azo ovaina avy amin'ny toe-javatra miaraka amina lisitra ahafahantsika manova ireo fampiharana tsy tiana hampiasaina, ohatra, ny mikrô. Filokana tena mahaliana an'ny Google ho an'ny Android M.
Takelaka manokana ho an'ny Chrome
Ny fampiharana izao dia afaka manampy tab manokana Chrome. Tsy ho an'ny M ihany io ary anisan'ireo hatsaran-tarehiny ny famenoana haingana ny kapoka. Farany, hiezaka izy hanolotra traikefa an-tserasera tsara fanatanterahana amin'ny alàlan'ny finday.
Rohy mivantana amin'ny rindranasa
Ohatra iray mazava izay mampiseho ny fampiasana rohy mivantana amin'ny apps. Mahazo rohy mankany amin'ny Twitter izahay avy amin'ny mailaka ary tsindrio eo amboniny hanokatra mivantana ny fampiharana Twitter nefa tsy mila mandalo ny safidin'ilay fampiharana tahaka ny ankehitriny misy amin'ireo kinova Android teo aloha.
Fitaovana iray izay dia ho hita amin'ny kinova Android hafa amin'ny 4.4 Ary izany dia hidika ho fandoavam-bola haingana amin'ny telefaona nefa tsy mila miahiahy momba ny fanitsiana sy ny fotoana very fotsiny. Ary misy ifandraisany betsaka amin'ny fampiasa hafa an'ny Android M, ny sensor fantsom-pejy.
Android M dia hanolotra fanohanana feno ho an'ny fitaovana mpamaky rantsantanana. Fampisehoana iray izay manampy ny fandoavam-bola amin'ny telefaona sy ny fahaizana mamoha ilay fitaovana miaraka amin'ity fiasa mahaliana izay efa hitantsika tamin'ny terminal ity.
Fitantanana bateria tsara kokoa sy USB Type-C
Indro misy Ny tombotsoan'i Google dia amin'ny androm-piainan'ny terminal ary io no manana ny lehibe indrindra azo atao. Ny hatsaran-toetra ao amin'ny Android M amin'ity lafiny ity dia ho an'ireo fampiharana izay ho ao ambadika izay hiditra amin'ny "mode matory" ka hiasa isaky ny fotoana izy ireo amin'ireo hetsika manan-danja toy ny fanairana. Ity, hoy ny Google, dia hidika ho avo roa heny amin'ny androm-piainana. Tsy maintsy ho hitantsika izany.
Farany, ny Fanohanana USB Type-C. Zavatra efa niandrasantsika ary izany dia midika fa afaka mampiasa azy io isika handefasana fitaovana hafa. Azonao atao ihany koa ny misafidy ny fampiasana izay homena ny USB amin'ny fotoana iray toy ny aseho amin'ny sary etsy ambany.
Google hamita ny fanazavana ny lakilen'ny 6 an'ny Android M koa Notanisainy ny sasany amin'ireo antsipiriany vaovao ho azontsika toy ny fanatsarana ny fakana tahaka, fizarana menio miaraka amin'ny fidirana amin'ireo fifandraisana, na izay fanaraha-maso tsara kokoa ho an'ny fampandrenesana, fanairana sns.
Hetsika izay mbola misy ary azonao arahana avy amin'ity rohy ity.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » About us » Ny lakilen'ny enina an'ny Android M
Lazain'izy ireo foana ny fanatsarana bateria ary manana lollipop aho ary lany haingana!
Mandra-pivoakan'izy ireo ny Memory Leak ... Ity no olana
[APK] Google Photos misy anio miaraka amin'ny fitehirizana tsy voafetra maimaimpoana
Google I / O 2015: Androany dia afaka aseho amin'ny Google Sticks roa vaovao isika, Chrome OS azo entina ary ny Chromecast 2